Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo yihiin madaxweynaha Maraykanka | Xaysimo
Home War Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo yihiin madaxweynaha Maraykanka
“Sow ma aha wax layaab leh haddii aan qaraabo noqono Joe Biden?” ayay tiri Rose oo ka hadlaysa madaxweynaha cusub ee markaa loo doortay Maraykanka.
Harris oo la yaabay hadalkaas ayaa sheegay in uu eegi doono arrinkaas. Baaritaanka uu sameeyay ayaa waxa uu ku ogaaday in xiriir xooggan uu ka dhexeeyo madaxweynaha iyo reer ay qaraabo yihiin oo ku nool Westbourne, oo ah tuulo ka tirsan Galbeedka Sussex ee England.
Waxa kadib waxaa u soo baxday arrin cajiib ah: in Harris ay ilma abti shanaad yihiin Madaxweyne Biden.
Qoraalka sawirka,Sida ay qaraabo u yihiin labada qoys
Qoraalka sawirka,Ivy iyo Marley oo ay dhashay Rose
“Wax wanaagsan ayay noqon lahayd haddii carruurteydu helaan wax ku saabsan xiriirka, ayna la sii wadaagi karaan ubadkooda,” ayay tiri Rose Patton.